सबैभन्दा ठूलो, दुई तिहाइ बहुमतसहित सत्ता सम्हालेको र आर्थिक समृृद्धिलाई मूल नारा बनाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का लागि आजको राष्ट्रिय राजनीतिको आवश्यकता के होला? मुलुकको आर्थिक विकास र समृृद्धि? होइन।
मुलुकको आधारभूत पूर्वाधार विकास? होइन। पार्टीले दाबी गरेजस्तै समाजवादमा पुग्नका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति? यो पनि होइन। सुशासन, सामाजिक न्याय तथा सार्वजनिक यातायातको स्तरोन्नति? यस्तो त झनै होइन। त्यसो भए सत्तारूढ नेकपाका लागि आजको राष्ट्रिय राजनीतिको आवश्यकता के होला?
उता डा. गोविन्द केसीका मागप्रति बेवास्ता गर्दै मेडिकल शिक्षाको बेहाल कायमै छ। यता सम्झौताबमोजिम मेडिकल माफियाले विद्यार्थीसँग लिएको अतिरिक्त रकम फिर्ता दिएका छैनन्। सरकार आफैंले बनाएको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने कुरा त परै जाओस्, सार्वजनिकसमेत गरेको छैन।
त्यसो भए दलाल पुँजीवाद कहाँ छ? भुसालको कुरालाई सत्य मान्ने हो भने सबैभन्दा दलाल पुँजीवादको भीमकाय संयन्त्र अरु कोही नभएर स्वयं नेकपाको सांगठनिक संरचना हो। किनकि घनश्याम भुसालले दाबी गरेजस्तै ‘नेकपाको केन्द्रदेखि विभिन्न संरचनामा रहेका १०–१५ लाख संगठित व्यक्ति परिचालन गरेर ‘सामाजिक रुपान्तरणको आजको कार्यभार’ पूरा हुने छैन। बरु पार्र्टी राज्यदोहन मात्र गर्ने पक्षघात भएको निकम्मा संयन्त्रमा रुपान्तर भइरहेको छ।
त्यसो भए आफैँले हलो अड्काएर नेकपाले गोरु किन चुट्दै छ त?
नेता घनश्याम भुसालले आफ्नो लिखित मन्तव्यमा भनेका छन्, ‘..उही काम दोहोर्याएर फरक परिणामको आशा गर्नु बुद्धिमानी हुँदैन भनिएझैँ, आजका वैचारिक र सांगठनिक अस्पष्टता, गुटबन्दी र विधिहीनता बोकेर कार्यकर्ता परिचालन र अधिवेशन गर्दा फरक परिणाम नआउने कुरा स्पष्ट छ। बरु यथास्थितिकै विस्तार हुनेछ।’
वास्तवमा नेकपा र यसको शीर्ष नेतृत्वले चाहेको नै यथास्थितिको विस्तार हो। किनकि उनीहरूको हित, स्वार्थ र महत्त्वाकांक्षा यथास्थितिले नै पूरा गरिरहेको छ। शीर्ष नेतृत्वले उही काम किन दोहोर्याइरहन्छ भने उसले परिणाम पनि उही चाहिरहेको छ। उसलाई निरन्तर सेवा गरिरहेको परिणामलाई उसले किन बदल्ने?